Iindaba zesiXhosa, 18 eyeKhala 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 18 eyeKhala 2019
Written by Ashia Nkontsa on 18/07/2019
Amabanjwa aphila kamandi entolongweni
Amabanjwa kweli lizwe makayeke ukutya nje imali yabahlawuli berhafu asogqiba alale. Esi siphakamiso sombutho wezopolitiko I African Transfomation Movement ( ATM ) . Umongameli walo mbutho umnu. Vuyolwethu Zungula uthi amabanjwa aphila ubomi obumnandi kakhulu kweli
Izakwandiswa indlela yase Belhar Main Road
Sibekele bucala imali engamashumi amane anesithoba ezigidi zeerandi (R49 mill ngabula makumsha)yokwandisa indlela yase Belhar isixeko esimbaxa sase Kapa. Sikwenza oku kwinzame zokunqanda unxinwano lwezithuthi kwindlela iHighbury nemimandla eyingqongileyo ndawonye nokuhlumisa uqoqosho kummandla iKuils River.Ilungu lekomiti kasodolophu kwicandelo lezothutho kwisixeko sase Kapa uFelicity Purchase uthi le projekti nezakuthabatha inyanga ezingamashumi amabini izakuqalisa kwinyanga ezayo.Uqhube wathi ukwandiswa kwale ndlela I Belhar Main Rd kuzakunceda ukuphucula indlela yokungena nokuphuma kula mmandla.Isixeko esimbaxa sase Kapa sibambe intlanganiso nenkokheli zabahlali bala mmandla ngolwesibini ebutsheni bale veki nalapho bekushukuxwa umba wazo zonke ikcukacha ngale project kwaye kulindeleke ukuba kubekho usuku apho kuzakuvuleleka ukuba abahlali banikwe ithuba lokuba bafumane inkcukacha ezithe vetshe ngayo.Ukanti lonyuke ngamandla unxinwano lwezithuthi kwindlela yase Belhar isithuba seminyaka eli qela. Oka Purchase uthi bagqibe kwelokuba badibabise le ndlela nalapho izakudibanisa iHighbury neStellendale ukuphucula indlela yokungena kwabahlali nosomashishini basekuhlaleni . Uthi xa sele igqityiwe ukwakhiwa kuzakungena abantu abaninzi nento ezakuthi incede ukuba kuphucuke iqoqosho kula mmandla. Uqhube wathi le projeckti izakuncedisa ukudala amathuba emisebenzi kwanokuphuculwa kwezakhono zoluntu.
AbahlaIi babona emancinci amathuba eziphumo ezihle kwicala lika Zuma
ntloko yejaji uMogoeng Mogoeng izolo udize ukuba imiqathango yobugqina ngakwikomishoni ephanda ngefuthe lamaqurhu abucala kumbuso weli kungenziwa inguqu kuyo ngumongameli weli lizwe umnu. Cyril Ramaphosa kuphela xa uluntu luthe lwenza eso sicelo. Emva kobungqina bukalowo wayesakuba ngumongameli kweli umnu. Jacob Gedleyihlekisa Zuma kule veki abantu abaninzi badize ukuba indlela eqhuba ngayo uphando le komishoni yenza ukuba abemancinane kakhulu amathuba okuba kufumaneke ezona ziphumo zincumisayo malunga nalo mba. Oka Mogoeng uthi usekela jaji oyintloko u Raymond Zondo akanawo amagunya okwenza utshitsho esithi imiqathango yenziwa ngumongameli . Uqhube wathi naye uqobo akanawo lo magunya. Ukutsho oku ngethuba ebethetha kwintetho yakhe yesikokhelo yemizuzu yakhe engama-67 ngosuku olwandulela olokuqaphela olwegqala lo mzabalazo utatu Nelson Rholihlahla Mandela kwihlabathi jikelele noluthi luqatshelwe minyaka le ngomhla we-18 kule nyanga.
Okuhle kokokuba uMzantsi Afrika akahambi phambili ngokusasaza isifo sika gawulayo
Ingxelo zamva nje ezimalunga nesifo sikagawulayo zezizwe ezimanyeneyo zidiza ukuba kuyaxhalabisa ukonyuka kwezinga lokosuleleka okutsha kwamanye amazwe. Kodwa ilizwe lomzantsi Afrika libonakalisa iziphumo ezihle zokulwa ukusasazeka kwentsholongwane kagawulayo ndawonye nesifo ugawulayo. Ingxelo yehlabathi jikelele malunga nogawulayo iphehlelelwe kwiphondo laKwazulu- Natal ebutsheni bale veki. Umqondisi wesi sifo kwizizwe ezimanyeneyo uMbulawa Mugabe uth imimandla emiminzi kweli lizwe ibonakalisa ukuba sele iqabele ngaphaya komlinganiselo wokulwa usuleleko lwesi sifo womyaka ka2020. Uthi oku kubonisa ukuba xa uluntu luxhotyiswa ngolwazi ziyafumaneka iziphumo ezilindelekileyo. Oka Mugabe uthi umngeni abajamelene nawo kungoku nje ngowokuba bazakwenza ntoni ukugcina ezi ziphumo zihlale zizihle ngoluhlobo . Uqhube ngama-200 olutsha lwasetyhini oluneminyaka ephakati kwe-15 nama-24 ubudala olusuleleka rhoqo ngemini kweli lizwe kodwa uthi urhulumente unaso isicwangciso sokuqubisana nale ngxaki.